Ihe nkiri mafia kacha mma: gịnị ka ha bụ? Emelitere 2018 | Nye m oge ntụrụndụ
Nye m oge ntụrụndụ
Ihe nkiri mafia kacha mma
Gabriela moran | | Cine, Ihe nkiri sinima, Cinema site n'ụdị, General
na Ihe nkiri Mafia akpalitela oke mmasị na ndị na -ege ntị na mba ụwa. N'ime nkata ahụ anyị na -ahụ njikọta mara mma juputara na asịrị na ime ihe. Na nke ahụ a na -ekwu maka okwu ndị dị ka ịzụ ahịa ngwa ahịa, esemokwu dị n'etiti akụkụ dị iche iche na nnukwu ihe okike imezu atụmatụ ndị na -abụghị iwu edobere.. Nnukwu isiokwu ga -agbawa na nnukwu ihuenyo! Ọ bụ ya mere na n'ime akụkọ a, anyị na -eji ihe nkiri mafia kacha mma ekpughere nhọrọ anyị oge niile.
Atụmatụ ndị ahụ anaghị anọchite anya akụkọ ifo ọ bụla: gosipụta eziokwu siri ike nke dị n'ime otu mafia na gburugburu ha. Agbanyeghị, akụkọ ndị ahụ na -eju anyị adrenaline na aghụghọ site na mkpụrụedemede mara mma nke na -amasị okomoko, ike na anyaukwu. Gụzie ka ịmụta maka akụkọ kacha dị mkpa nke ụdị ihe nkiri ahụ mepụtara!
Ịzụ ahịa bụ mpụ: ngwongwo iwu na -akwadoghị agbanweela ka oge na -aga. Agụnyela ụtaba, mmanya na ọgwụ sịntetik na ndepụta nke ngwa ahịa ntaramahụhụ n'ime oge dị iche iche. Enwere ụlọ ọrụ ewepụtara maka ịzụ ahịa ọbụlagodi ndị mmadụ!
N'ihi mgbagwoju nke arụmọrụ, ndị omempụ na -ahazi n'ime otu na -achịkwa ntuziaka na -adịghị agha agha. Ọ bụ ya mere e jiri mepụta mafia akụkọ ifo ka oge na -aga. Dịka ọmụmaatụ anyị na -ahụ Mafia nke Italiantali, Russia na Japan n'etiti ndị ama ama. N'aka nke ọzọ, ndị Kọntinent America nwekwara netwọkụ sara mbara mpụ a haziri ahazi, nke kpaliri ọtụtụ ihe nkiri mafia.
N'ime aha ndị mepụtara ndị na -ege ntị kachasị na ụlọ ihe nkiri, anyị na -ahụ ihe ndị a:
1 Nna Chukwu (Nkebi I, II, III)
5 Ihe a na -ahụghị anya nke Eliot Ness
6 Gangster America
7 Ihe nkiri Mafia ndị ọzọ akwadoro
Nna Chukwu (Nkebi I, II, III)
Ọ bụ ihe nkiri sinima nke nwere usoro abụọ. Ọ bụ mmegharị nke akwụkwọ akụkọ Mario Puzo ọ bụ onye ama ama Francis Ford Coppola duziri ya. Ihe nkiri izizi nke trilogy meriri Oscar maka ihe nkiri kacha mma nke afọ. E wepụtara ya na 1972 wee kpọọ Marlon Brando, Al Paccino, Robert Duvall, Richard Castellano na Diane Keaton.
"Nna nna" na -akọ akụkọ banyere ezinụlọ Corleone: nke mejupụtara ezinụlọ Italiantali-America nke so n'ime ezinụlọ ise kachasị mkpa nke Cosa Nostra nke New York. Ezinaụlọ a bụ Don Vito Corleone, onye metụtara ihe gbasara mafia.
Akụkọ na -agụghachi azụ na akụkụ nke abụọ na nke atọ ewepụtara na 1974 na 1990 n'otu n'otu. Ezinụlọ ahụ nwere ụmụ nwoke atọ na otu nwanyị. Maka ụfọdụ n'ime ha ọ dị mkpa ịga n'ihu na azụmaahịa ezinụlọ, agbanyeghị ndị ọzọ enweghị mmasị. Anyị na -ahụkarị Don Vito ka ya na ezinụlọ na -arụkọ ọrụ iji lekọta alaeze ya.
N'ime ihe nkiri atọ ahụ anyị na -ahụ njikọ aka na esemokwu dị n'etiti ezinụlọ ise bụ isi nke mafia nke Italiantali na nke na-achịkwa mpaghara ahụ. Na mgbakwunye na Corleones, anyị na -ahụ ezinụlọ Tattaglia, Barzini, Cuneo na Stracci.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ trilogy nke ị na -agaghị agbaghara! Ihe nkiri atọ ya so n'ime ihe nkiri kacha asọpụrụ ma nwee ekele na mba ụwa. Na 2008, ọ họọrọ nke mbụ na ogo nke 500 Best Movies of All Time., nke magazin Empire mere.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị nnọchi anya Quentin Tarantino kacha emepụta, ewepụtara ya na 1994 ma a na -ahụta ya dị ka otu n'ime fim kacha mma n'afọ iri. E kewara fim ahụ n'ọtụtụ isiakwụkwọ jikọrọ ọnụ. Ọ na -eme ihe nkiri ama ama dịka: Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson na Bruce Willis.
Na ibé na -akọ akụkọ banyere Vincent na Jules: mmadụ abụọ kụrụ. Ha na -arụrụ otu onye omekome dị egwu aha ya bụ Marsellus Wallace, onye nwere nwunye mara mma aha ya bụ Mia. Marsellus na -arụ ndị ọrụ ya ọrụ nke iweghachite obere akpa ihe omimi nke ezuru ya, yana ilekọta nwunye ya mgbe ọ na -apụ n'obodo.
Mia bụ nwa agbọghọ mara mma nke ndụ ya kwa ụbọchị na -agwụ ike, ka ọ were na -etinye aka na Vincent: Otu n'ime ndị ọrụ di ya! Mmekọrịta dị n'etiti ha na -anọchite anya nnukwu ihe egwu ma ọ bụrụ na di achọpụta ihe banyere ọnọdụ ahụ. N'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị Jules, Vincent na -ahapụ mmetụta ya maka Mia ka ọ na -eto ma na -eme ihe niile na -agụ ya, otu n'ime ha na -etinye ndụ ya n'ihe egwu!
Ka ha na -agagharị n'obodo ahụ, ha na -aga klọb ebe a na -eme otu n'ime ihe nkiri kachasị emetụ n'ahụ nke ihe nkiri ahụ site na ịgba egwu dị egwu n'ala.
Site n'ụdị aghụghọ nke Tarantino, akụkọ na -apụta juputara na ime ihe ike, igbu ọchụ, ọgwụ ike na ọchị ojii. Ọ bụrụ na ịhụbeghị ya, ị gaghị agbaghara ya!
Aha a dabara na mmegharị nke ihe nkiri ewepụtara na 1932. E wepụtara ụdị ọhụrụ ahụ na 1983 wee kpọọ Al Paccino. "Ihu ihu" cma ọ bụ kwekọrọ na otu n'ime fim mafia nke kpatara ọtụtụ esemokwu: Edebere ya "X" na United States maka oke ime ihe ike dị n'ime ya!
Tony Montana, onye na -eme mkpọtụ, bụ onye si mba Cuba kwabata nwere nsogbu dị ndụ gara aga nke bi na United States. Ike gwụrụ ndụ jupụtara na ịda ogbenye na enweghị ike, Tony kpebiri imeziwanye ndụ ya n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụ ya mere ya na enyi ya Manny ji bido were ọrụ ndị isi na -eme ihe ike na -arụ ọrụ megidere iwu. N'oge na -adịghị anya, ọchịchọ ya na -eto na na -amalite azụmahịa nke ya na -ere ọgwụ ike ma na -ewulite netwọkụ nkesa na nrụrụ aka siri ike. Ọ ghọrọ otu n'ime ndị na -azụ ahịa ọgwụ ọjọọ na mpaghara ahụ!
Mgbe ọ ga -eme nke ọma, ọ kpebiri imeri enyi nwanyị nke otu onye iro ya. Gina, nke Michelle Pfeiffer na -akpọ, bụ nwanyị mara mma nke lụrụ Tony obere oge.
Ị cocaineụ koken riri Tony ahụ́, ọ na -esikwara ya ike ijide onwe ya. Ọ na -amalite ịmụba aha ndị iro ya na inwe nsogbu alụmdi na nwunye. Ka akụkọ a na -aga, ọtụtụ ihe ngosi nke ọgụ megide ndị iro nke nzukọ na -apụta.
Ị gaghị agbaghara ihe nkiri a, ọ bụ n'ime iri kachasị nke nhọrọ nke American Film Institute!
Nke ama onye nduzi Martin Scorsese; anyị na -ahụ otu n'ime ihe nkiri mafia kachasị ọhụrụ ewepụtara na 2006. Na ihe nkiri enyo enyo ndị uwe ojii, anyị na -ahụ Leonardo Di Caprio na Matt Damon dị ka ndị ngagharị iwe. The Departed meriri Oscar maka eserese kacha mma n'afọ ahụ!
Ihe nkata ahụ hiwere isi na ndụ nke mmadụ abụọ na -abanye n'akụkụ ndị na -emegide: onye uwe ojii batara na mafia na otu onye na -eme ihe ike batara na ndị uwe ojii. Ngwakọta mgbawa juputara na ihe nkiri, enyo enyo na aghụghọ! Onye na -eme ihe nkiri Jack Nicholson na -enye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ga -akpali mmetụta gị na arụmọrụ pụrụ iche ka ọ na -egwu Frank Costello. Ọ bụ onye na -eme mkpọtụ ọbara nke nwere ọtụtụ ndị iro yana onye nwere mmekọrịta chiri anya na otu n'ime mmadụ abụọ na -eme ngagharị iwe, onye na -enyocha ya site na Ngalaba ndị uwe ojii Boston.
Enwere triangle ịhụnanya onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ sitere na ngalaba ndị uwe ojii.
Anyị na -ahụ mgbagọ na -atụghị anya ya na akụkọ na ọtụtụ ihe, nke mere na -ewere ya dị ka otu n'ime fim kachasị mma nke ụdị. Agaghị ekwukwa na Scorsese na -abụkarị nkwa maka ihe nkiri nwere ogbugbu!
Ihe a na -ahụghị anya nke Eliot Ness
Ewepụtara ya na 1987, ihe nkiri a jikọtara ya na mafia na-akọ akụkọ ọzọ: ya bụ, ụdị ndị uwe ojii nke ihe na -eme n'ọgụ megide mpụ a haziri ahazi. Ọ bụ Kevin Costner gbara ya isi, nke kacha pụta bụ Robert de Niro, yana Sean Connery.
Ihe nkiri sỌ na -eme na Chicago n'oge oke igwe mmadụ America. Onye protagonist bụ a uwe ojii nke ọrụ ya bụ ime ka Mgbochi, yabụ, ọ na -awakpo mmanya na Al Capone a na -atụ ụjọ. N'ebe ahụ ọ na -ahụ ihe na -atụ n'anya nke na -eme ka o chee na ndị uweojii na -enye ndị uwe ojii obodo aka azụ; ka ọ dKpebie ịkpọkọta ndị otu ga -enyere gị aka ịkwatu mgbidi nrụrụ aka.
Nnukwu ihe nkiri sinima nke XNUMXs nwere ọtụtụ ihe na -echere gị!
Starring Denzel Washington, ihe nkiri akụkọ ihe mere eme a dị na ndepụta nke fim mafia kachasị mma n'ihi na ọ dabere n'ezi ihe omume ma anyị na -ahụ akụkụ abụọ nke ihe ịga nke ọma site na ibi na mpụga iwu.
Ndị Akụkọ Frank Lucas, otu n'ime ndị na -azụ ahịa onye ama ama na -azụ ahịa ọgwụ ọjọọ nke nwụrụ n'ihi ihe ebumpụta ụwa. Lucas bụ onye aghụghọ na onye nwere ọgụgụ isi, ya mere ọ mụtara ka esi azụ ahịa na Ọ malitere imepụta ụlọ ọrụ nke ya nke gụnyere ezinụlọ ya niile na o sitere na umeala n'obi. Lucas zutere Eva, nwanyị mara mma nke ya na ya kpebiri ịlụ na ịmalite ezinụlọ.
N'oge na -adịghị ha Ha na -amalite ibi ndụ n'ụzọ na -enweghị atụ nke na -adọta uche onye nchọpụta na -anaghị emebi emebi Richie Roberts, nke Russel Crowe na -akpọ. Ozugbo onye nyocha ahụ na -amalite nyocha na -agwụ ike na ebumnuche ịwepụ onye ukwu ọhụrụ nke mafia ka akpọrọ ya n'azụ ụlọ mkpọrọ.
Na mmepe fim anyị nwere ike ịhụ ihe nkiri nke ime ihe ike na oke nrụrụ aka nke ndị mafia na -eji na -arụ ọrụ.
Anyị nwere ike ịhụ akụkụ mmadụ nke ndị aghụghọ na fim a, mana nsogbu anaghị akwụsị inye ha nsogbu. American Gangster abụrụla ihe na -amasị ndị na -enwe mmasị na fim ihe nkiri Holywood!
Ihe nkiri Mafia ndị ọzọ akwadoro
Na mgbakwunye na aha ndị a kpọtụrụ aha n'elu, anyị na -ahụ ndị ọzọ dị oke mkpa ma edepụtara ha n'okpuru:
N'otu oge na America
Otu onye n'ime anyi
Ndị omempụ New York
Ọnwụ n'etiti okooko osisi
Nkwa ndị ọwụwa anyanwụ
Akụkọ banyere ime ihe ike
Tụọ ịhụnanya efu
Egwuregwu ruru unyi
Nchikota: Ezi na ola diamond
Ndepụta ahụ enweghị njedebe! Enwere ọtụtụ aha maka ụdị a nke na -enyekarị anyị ọmarịcha ihe omume, enyo enyo, okomoko na ime ihe ike. Isi iwu bụ igbu mmadụ ka ọ dịrị ndụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Ihe nkiri mafia kacha mma
Ihe nkiri ị nwere ike ikiri na YouTube n'efu (yana iwu)